साना र मझौला व्यवसायीलाई एकीकृत गर्ने प्रयाशमा छौं : अध्यक्ष पाैडेल-Setoghar
राज्यकाे सहयाेग प्राप्त भए ठूलाे राेजगारी सृजना गर्न सकिने क्षेत्र
वि.सं २०५३ देखि जुत्ताचप्पल क्षेत्रमा जागिरेको रुपमा प्रवेश गर्नुभई यस क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्नुभएका आनन्द प्रसाद पौडेलले भर्खरै सम्पन्न अधिवेशन मार्फत नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । वि.सं २०५७ देखि एमपी फुटवेयर नामक जुत्ता उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका ऊहाँ निरन्तर रुपमा नेपाली उत्पादनको प्रबद्र्धन र बजारीकरण गर्नुपर्ने मान्यता बमोजिम अघी बढिरहनुभएको छ । व्यवसायीहरुलाई सचेत र जागरुक समेत
आनन्द प्रसाद पौडेल अध्यक्ष, नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी संघ
बनाउँदै व्यावसायिक हकहितको लागि समेत चिन्तनसिल पौडेल आफ्नो कार्यकालमा साना व्यवसायीहरुका हक, हित र अधिकार स्थापित गर्ने योजनाको साथ निरन्रत क्रियाशिल हुनुहुन्छ । खासगरी लेडिज जुत्ता
चप्पल उद्योगहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा काम गर्दै आउनुभएका ऊहाँ नेपालमा अहिलेको अवस्थामा जुत्ताचप्पल व्यवसाय निकै नै फस्टाउँदै गएको बताउनुहुन्छ । अर्घाखाँचीको ठाडा क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा पौडेल आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको एमपि फुटवेयर उद्योगबाट १५ जना व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । आफ्नो उद्योगबाट मासिक ५ हजार जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्दै आउनुभएका ऊहाँ राज्यले लगानी गर्न उपयुक्त औद्योगिक वातावरण बनाइदिए करिब २० हजार मानिसलाई यस क्षेत्र मार्फत रोजगारी दिन सकिने समेत बताउनुहुन्छ ।
प्रस्तुत छ उनै पौडेल सँँग रहेर जुत्ताचप्पल क्षेत्रको अवस्था, व्यावसायिक गतिविधि, संघले गर्दै आएका कार्य र आगामी कार्यदिशा बारे गरिएको कुराकानी ः
नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी संघ कहिले र किन स्थापना भएको हो ?
हाम्रो यो संघ वि.सं २०७० माघ १८ मा स्थापना भएको हो । नेपालमा सानो लगानीमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई एकत्रित गरेर व्यावसायिक हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने मान्यताले यो संस्था स्थापना गरिएको हो । यस बीचमा संघले विभिन्न किसिमका व्यावसायिक हकहितको लागि काम गर्दै आएका छौं । हामीले हाम्रा समस्याको बारेमा अवगत गराउँदै सरकारसँग व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि झक्झक्याउने काम समेत हामीले गरेका छौं । हामीले विभिन्न रचनात्मक कामहरु समेत गरेका छौं । साथै व्यावसायिक प्रवद्धन तथा मेला आयोजना लगायतका कामहरु समेत हाम्रो संघबाट हुँदै आएका छन्ं । हाम्रो यस संघमा जुत्ताचप्पल उत्पादक तथा विक्रेताको अलावा कच्चा पदार्थ आयातकर्ता, कार्टुन उत्पादक कम्पनी लगायत समेत संलग्न छन् । हाम्रो संघमा अधिकांश लेडिज जुत्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरुको सङ्ख्या ठूलो छ ।
आगामी दिनमा हामीले सबै किसिमका व्यवसायीहरुलाई नेतृत्वदायी क्षमता विकासमा जोड दिँदै व्यावसायिक हकहितको लागि आवाजहरु उठाउने, आवश्यक नीतिनिर्माण तय गर्नको निम्ति राज्य पक्षलाई घच्घच्याउने र व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्ने लगायतका कामहरु पनि गर्नेछौं । हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक दक्ष कालिगढ उत्पादनको लागि समेत राज्य तथा विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यहरु गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।
संघको नेतृत्व तपाईंंले लिनुभएको छ, संघलाई अघी बढाउन तपाईंका आगामी योजनाहरु के छन् ?
हामीले नेपालमा भएका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई समेट्ने कार्यलाई अझ तीव्रताको साथ अघी बढाउनुपर्नेछ । नेपालमा हामीले खासगरी हामीले सानो र मझौला लगानीका व्यवसायीहरुलाई साथ लिएर अघी बढेका हुनाले हाम्रो पहुँच सबै ठाऊँमा विस्तार हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा हामीले सबै किसिमका व्यवसायीहरुलाई नेतृत्वदायी क्षमता विकासमा जोड दिँदै व्यावसायिक हकहितको लागि आवाजहरु उठाउने, आवश्यक नीतिनिर्माण तय गर्नको निम्ति राज्य पक्षलाई घच्घच्याउने र व्यावसायिक वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्ने लगायतका कामहरु पनि गर्नेछौं । हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक दक्ष कालिगढ उत्पादनको लागि समेत राज्य तथा विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यहरु गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।
नेपालमा जुत्ताचप्पल सम्बन्धी काम गर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरुका खास समस्याहरु के–के छन् ?
अहिले नेपालमा हामीले जुत्ता चप्पल क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति आवश्यक दक्ष कालिगढ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको निम्ति हाम्रो अग्रसरतामा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ । नेपालमा अहिले आवश्यक दक्ष कालिगढ उपलब्ध नभएको कारण भारत लगायतबाट कालिगढ नेपालमा ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।
यस क्षेत्रमा कस्ता कालिगढको आवश्यक पर्छ ? कालिगढ उत्पादन गर्न कति समय लाग्छ ?
हाम्रो उद्योगमा अपर र बटम गरी मुख्य २ कामहरु हुने गर्छन् । काम प्रति जागरुक र प्रतिवद्ध हुने हो भने ६ महिनाको अवधिमा यस क्षेत्रमा आवश्यक सबै किसिमका कामहरु सिक्न सकिने अवस्था रहन्छ । साथै नेपालमा यस क्षेत्रमा काम सिक्ने हो भने प्रयाप्त रोजगारी पाउन सकिने अवस्था समेत छ । नेपालमा नै स्वरोजगार बन्न चाहनेहरुको लागि समेत यो क्षेत्रमा निकै राम्रो अवसर छ ।
कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा अहिले पनि जुत्ताचप्पलको निम्ति आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आयातमा नै निर्भर छन् । यद्यपि विगतमा आयातित तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर एउटै भएकोमा अहिले तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाइएको छ । यद्यपि कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएर नेपाली उद्योगीहरुलाई सहज वातावरण बनाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ । तर अहिले यो वातावरण बन्न सकेको छैन ।
यस संघमा आवद्ध उद्योगी-व्यवसायीहरु मार्फत नेपालमा कति व्यक्तिले रोजगारी पाएको अवस्था छ ?
यस संंघमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुले न्यूनतम करिब १ लाख देखि बढीमा करिब ५० लाख रकम लगानी सम्मका जुत्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुभएको छ । हाल यस संघमा आवद्ध व्यवसायीहरु मार्फत करिब ५ हजारले रोजगारी पाइरहेको हुनुपर्छ । यद्यपि राम्रो उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको खण्डमा हामीले करिब १५ हजार देखि २० हजार सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं ।
अहिले नेपालमा लेडिज जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको सङ्ख्या कति छ ?
हामीले विगतमा संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा लेडिज जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको सङ्ख्या साढे २ सय देखि ३ सयको हाराहारीमा हुनुपर्छ । कतिपय व्यवसायी नयाँ थपिने साथै कतिपय बाहिरिने अवस्था समेत रहने हुनाले अहिले यत्ति नै छन् भन्ने अवस्था भने छैन । यद्यपि हामीले भर्खर मात्रै नयाँ कार्यसमितिको जिम्मेवारी लिएका छौं । हामीले आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अभिलेख राख्ने कार्य गर्नेछौं ।
नेपालमा लेडिज जुत्ता उत्पादन गर्दा बढी मात्रामा कस्तो प्रविधि अपनाउँदै आइएको छ ?
बजारमा अहिले लेडिज जुत्ता उत्पादनको निम्ति पुरानै प्रविधिमा आधारित मेसिनहरुको नै प्रयोग हुँदै आएको छ । हाल पियु प्लान्टबाट स्वचालित जुत्ता उत्पादनको काम समेत हुन थालेको छ ।
लगानीको हिसाबले यो क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो ?
हाम्रो यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्नको लागि सानो देखि ठूलो लगानी सम्ममा काम गर्न सकिने अवस्था छ । न्यूनतम १ लाख रकमको लगानी देखि अधिकतम करोडौं रकम लगानीमा यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सकिने अवस्था छ ।
ब्राण्डकै रुपमा स्थापित हुने किसिमले लेडिज जुत्ता उद्योगहरुले त खासै पहल गरेको पाईंदैन नि ?
वास्तवमा अहिले सम्म नेपालमा उत्पादित लेडिज जुत्ता चप्पलहरुको ब्राण्डिङ गर्न सकिएको छैन । यसै विषयलाई लक्षित गरी आगामी दिनमा उद्योगीहरु बीच ब्राण्डिङमा जोड दिँदै सोही बमोजिम जुत्ता उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । यसमा सबै व्यवसायी साथीहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।
कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ कस्तो छ ?
नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादनको निम्ति आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थको निम्ति हामी मुलुक भन्दा बाहिर नै निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । यद्यपि रवड उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भने नेपालमा पनि छ । यसलाई विशेष जोड दिँदै रवड उत्पादन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले समेत विशेष जोड दिनु आवश्यक रहन्छ ।